The 10 Best New Products We Saw At CES 2020 | Net Guide
Home Article The 10 Best New Products We Saw At CES 2020
နှဈသဈတဈခုရဲ့ အစပိုငျးမှာ အမွဲကငျြးပနတေဲ့ CES ပှဲကွီးကတော့ ပွီးဆုံးသှားပါပွီ။ Consumer Electronic Show ဆိုတဲ့အတိုငျး စိတျဝငျစားစရာ နောကျဆုံးပျေါ အီလကျထရောနဈထုတျကုနျတှကေို မွငျတှခှေ့ငျ့ရခဲ့ပါတယျ။ ပွောရမယျဆိုရငျ CES မှာ မွငျတှခေဲ့သမြှ ထုတျကုနျအားလုံးဟာ ကြှနျတျောတို့အတှကျ ယခုနှဈအတှငျးမှာ သုံးစှဲဖို့ စောငျ့မြှျောနရေမယျ့ ထုတျကုနျတှလေို့ ဆိုရမှာပါ။ ကဲ ဒီတော့ CES 2020 မှာ ဘာထုတျကုနျသဈတှေ မိတျဆကျခဲ့တာလဲဆိုတာကို လလေ့ာကွညျ့ရအောငျ။
(1). World’s First Foldable PC, ThinkPad X1 Fold
Lenovo က ပွီးခဲ့တဲ့နှဈက ပွသခဲ့တဲ့ ကမ်ဘာ့ပထမဆုံး ခေါကျခြိုးမကျြနှာပွငျပါတဲ့ PC ဖွဈတဲ့ ThinkPad X1 Fold ကို ရောငျးတော့မယျလို့ ကွညောလိုကျပါတယျ။ Windows Hello ထောကျပံ့တဲ့ ကငျမရာကို မကျြနှာပွငျဘောငျမှာ ထညျ့သှငျးထားပါတယျ။ 13.3 လကျမ မကျြနှာပွငျဖွဈပွီး OLED Panel ကို သုံးထားပါတယျ။ LG Display က မကျြနှာပွငျကို ထုတျလုပျပေးထားတာဖွဈပွီး ခိုငျခံ့မာကြောတယျလို့ ပွောပါတယျ။ Windows 10 Pro မောငျးနှငျထားပါတယျ။ Single Full Screen Mode လိုသုံးနိုငျသလို App2ခုကို ဘေးခငျြးယှဉျပွီး တဈပွိုငျနကျသုံးနိုငျတဲ့ Dual Screen Mode လညျး ပါပါတယျ။ Portrait Mode နဲ့သုံးရငျ အောကျခွမှော Screen Keyboard ကို သုံးနိုငျပါတယျ။ မကျြနှာပွငျကို ခေါကျခြိုးပွီး လကျပျတော့လိုသုံးတာ ဖွဈပါတယျ။ အောကျခွတေဈခွမျးပျေါမှာ Bluetooth Keyboard တငျပွီးသုံးလို့လညျး ရပါတယျ။ Kickstand ထောငျပွီး Bluetooth Keyboard နဲ့ တှဲသုံးလညျး ရပါတယျ။ အတှငျးပိုငျးအစိတျအပိုငျးတှကေိုတော့ မသိရသေးပါဘူး။ Lenovo က Intel Platform ကို သုံးထားမယျလို့ ပွောပါတယျ။ ဘကျထရီသကျတမျးက 11 နာရီ ဖွဈပါတယျ။ Windows 10 Pro Model ကို ဒီနှဈလယျမှာ ရောငျးမှာပါ။ ဈေးကတော့ 2499 ဒျေါလာ သတျမှတျထားပါတယျ။
(2). Samsung Galaxy Note 10 Lite and S10 Lite
Samsung အနနေဲ့ Galaxy S10 Lite နဲ့ Galaxy Note10 Lite ဖုနျးတှကေို တရားဝငျထုတျပေးလိုကျပွီ ဖွဈပါတယျ။ စမတျဖုနျးသဈ2မြိုးလုံးမှာ 6.7″ FullHD+ Infinity-O displays သုံးထားမှာဖွဈပွီး 4500 mAh ဘကျထရီမှာ 25W fast charging support လုပျတဲ့အပိုငျးတှေ တူညီမှာ ဖွဈပါတယျ။ Samsung Galaxy S10 Lite ဖုနျးမှာတော့ 7nm chipset တပျဆငျထားပွီး 2.8GHz, 2.4GHz, 1.7GHz အမွနျနှုနျးရှိတဲ့ octa-core CPU တဈခုခု ဖွဈနိုငျပါတယျ။ ဘယျလိုပရိုဆကျဆာသုံးထားတယျဆိုတာကို အတညျမပွုရသေးတာကွောငျ့ ဖွဈပါတယျ။ Snapdragon 855 ဖွဈမယျလို့တော့ ပွောနကွေပါတယျ။ 6GB (သို့) 8GB RAM မှာ 128GB storage နဲ့ ဖွဈမှာပါ။ ကငျမရာအတှကျတော့3လုံးဖွဈပွီး f/2.0 aperture နဲ့ 48MP ဆငျဆာကငျမရာ၊ 123-degree FoVultrawide angle ရမယျ့ 12MP sensor နဲ့ 5MP macro ဆငျဆာတှေ သုံးထားမှာ ဖွဈပါတယျ။ အရှဘေ့ကျကငျမရာကတော့ 32MP sensor ဖွဈပါတယျ။ ပိုပွီး ထူးခွားခကျြကတော့ Galaxy S10 Lite စမတျဖုနျးဟာ Samsung ဖုနျးတှထေဲမှာ ပထမဆုံး Super Steady OIS ကို သုံးထားမယျ့ဖုနျး ဖွဈပါတယျ။ ဒါဟာ အခွားဖုနျးတှထေကျ ပိုသာလှနျတဲ့ ကငျမရာရဲ့ တညျငွိမျမှုကို ရပါလိမျ့မယျ။
Galaxy Note10 Lite ဖုနျးမှာတော့ Air Command support လုပျတဲ့ S Pen ကို ထညျ့သှငျးပေးထားပါတယျ။ သူလညျး 32MP အရှဘေ့ကျကငျမရာကို 6.7” FullHD+ display ရဲ့ punch hole ထဲမှာ ထညျ့ထားမှာပါ။ Note10 Lite ပရိုဆကျဆာပိုငျးအတှကျ ထုတျဖျောပွောကွားထားခွငျး မရှိသေးပမေယျ့ 10nm process နဲ့ octa-core CPU ဖွဈဖို့ မြားပါတယျ။ RAM ကတော့ 6/8GB ဖွဈပွီး 128GB သိုလှောငျမှုနဲ့ သုံးနိုငျမှာပါ။ Galaxy Note10 Lite ရဲ့ နောကျကြောဘကျမှာလညျး ကငျမရာ3လုံး အထိုငျခထြားပွီး Dual Pixel AF နဲ့ OIS ပါတဲ့ 12 MP f/1.7 အဓိကဆငျဆာ၊ 12 MP f/2.2 ultrawide angle ဆငျဆာနဲ့ 12 MP f/2.4 telephoto တို့ပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဒီထကျပိုပွီး စိတျလှုပျရှားစရာကတော့ Galaxy Note10 Lite ဖုနျးမှာ 3.5mm audio jack ကို ထညျ့ပေးလိုကျတာပါ။ အရငျထှကျထားတဲ့ Galaxy Note10 မျောဒယျ3မြိုးနဲ့ Galaxy S10 မျောဒယျ3မြိုးလုံးမှာ audio port ကို ထညျ့ထားခွငျး မရှိပါဘူး။ Galaxy S10 Lite နဲ့ Galaxy Note10 Lite ဖုနျးတှမှော One UI2နဲ့အတူ Android 10 ကို တဈပါတညျး ထညျ့သှငျးပေးထားမှာ ဖွဈပါတယျ။ Prism White, Prism Black ၊ Aura Glow, Aura Black, Aura Red paint jobs ဆိုပွီး အရောငျစုံလငျစှာ ထုတျပေးထားပါတယျ။ Galaxy Note10 Lite ရဲ့ စြေးနှုနျးက ယူရို 599 ဖွဈပွီး S10 Lite ကတော့ ယူရို 649 သတျမှတျထားပါတယျ။
(3). Sony Surprises Vision-S Electric Car Concept
Sony ကတော့ CES မှာ အံ့သွစရာထုတျကုနျသဈလို့ဆိုရမယျ့ electric concept ကားကို ထုတျပွလိုကျပါပွီ။ စမတျဖုနျးနဲ့ ဖြျောဖွရေေးပစ်စညျးတှသောထုတျနတေဲ့ Sony အတှကျ မတူညီတဲ့ ဈေးကှကျကို ဦးတညျလိုကျတာ ဖွဈပါတယျ။ Sony Vision-S လို့ နာမညျပေးထားပွီး electric concept ဆီဒငျအမြိုးအစားကားပါ။ ဒီကားရဲ့ အခကျြအလကျအခြို့ကိုလညျး ထုတျပွနျခဲ့ပါသေးတယျ။ အဲ့ဒါတှကေတော့ ကားရဲ့ အတှငျးနဲ့ အပွငျပိုငျးမှာ မတူညီတဲ့ ဆငျဆာအမြိုးအစား 33 ထိ ထညျ့ပေးထားပွီး multiple widescreen displays, 360 audio အရညျအသှေးတှပေါ ပါဝငျပါတယျ။ ဈေးကှကျထဲမှာရှိတဲ့ BlackBerry နဲ့ Bosch မှာ ထညျ့ပေးထားတဲ့ နညျးပညာမြိုးတှပေါ။ လုံခွုံရေးနဲ့ ပတျသတျတဲ့ နညျးပညာတှကေိုလညျး ကားမှာ ထညျ့သှငျးပေးထားပါသေးတယျ။ နောကျခုံမှာထိုငျတဲ့သူတှအေတှကျလညျး touchscreens2ခုကို ထညျ့ပေးထားပါတယျ။ Sony ရဲ့ ကားအသဈဟာ အခွား SUVs ကားတှလေိုပဲ စှမျးဆောငျနိုငျမှာဖွဈတယျလို့ ဒီကားအတှကျ လိုအပျတဲ့ အစိတျအပိုငျးတှကေို ထုတျပေးတဲ့ Magna ပွောလိုကျပါတယျ။ ဆိုနီကုမ်ပဏီရဲ့ စီအီးအိုဖွဈတဲ့ ကငျနီရှီယိုကတော့ ဒီကားရဲ့ ရှပွေ့ေးပုံစံနဲ့အတူ ကြှနျတျောတို့ဟာ မျောတျောကားဈေးကှကျထဲကို ဝငျရောကျလာပွီဆိုတာကို ပွသလိုကျတာဖွဈတယျလို့ ထုတျဖျောမိတျဆကျပှဲမှာ ပွောသှားပါတယျ။
(4). OnePlus Concept One Introduced With A Disappearing Camera
OnePlus အနနေဲ့CES 2020 မှာ Concept One စမတျဖုနျးကို တရားဝငျထုတျပွလိုကျပါပွီ။ McLaren နဲ့ မိတျဖကျပွုလုပျပွီး ထုတျထားတဲ့ အဲ့ဒီစမတျဖုနျးမှာ ကငျမရာဟာ ပျေါလိုကျ၊ ပြောကျလိုကျ ပုံစံမြိုးနဲ့ ဖွဈပါတယျ။ OnePlus ကတော့ disappearing ကငျမရာလို့ နာမညျပေးထားပါတယျ။ ဒီဇိုငျးက လုံးဝစှဲမကျဖှယျဖွဈပွီး လုံးဝ အဝါရောငျစဈစဈ လညျသာသားနဲ့ ပွုလုပျထားတာပါ။ ကငျမရာနဲ့ pop-up selfie ကငျမရာတှေ ထညျ့ထားတဲ့ပုံစံက OnePlus 7T Pro နဲ့ဆငျတူပွီး ဒီဇိုငျးပုံစံကို သားရနေဲ့ ပုံဖျောထားတာပါ။ ကငျမရာကို နောကျဘကျဖနျသားရဲ့အောကျမှာ ထညျ့ထားတာဖွဈပွီး electrochromic glass ကို သုံးထားတာပါ။ ဖုနျးရဲ့ပုံစံကို McLaren က လကျရှိထုတျနတေဲ့ sports cars တှရေဲ့ ပုံစံပျေါမူတညျပွီး ဆနျးသဈထားတာပါ။ သငျ့အနနေဲ့ နောကျကြောဘကျကငျမရာကို အသုံးမပွုမခငျြး ကငျမရာဆငျဆာတှေ ပျေါလာမှာ မဟုတျပါဘူး။ ကငျမရာကို ရိုကျဖို့ပွငျဆငျလိုကျတာနဲ့ ကှယျဝှကျထားတဲ့ အခွအေနကေနေ ကငျမရာတှေ ပျေါလာမှာ ဖွဈပါတယျ။ ကငျမရာပျေါလာဖို့အခြိနျဟာ 0.7 စက်ကနျ့သာ ကွာမှာဖွဈပါတယျ။
(5). Hisense Demoes Phone With Color e-Ink Display
Hisense A5 ဖုနျးကိုတော့ ပွီးခဲ့တဲ့နှဈက ပွသခဲ့ပွီး e-Ink display သုံးထားပါတယျ။ ဒီနှဈမှာလညျး Hisense အနနေဲ့ e-Ink display သုံးထားတဲ့ စမျးသပျဗားရှငျး ရှပွေ့ေးစမတျဖုနျးတဈမြိုးကို ထပျမံပွသလိုကျပါတယျ။ အသေးစိတျအခကျြအလကျမြားကို သိရခွငျးမရှိပမေယျ့ display အသဈဟာ ယခငျထုတျထားတဲ့ Hisense A5 ဖုနျးထကျစာရငျ contrast နဲ့ refresh rates ပိုငျးမှာ ပိုကောငျးလာပါလိမျ့မယျ။ ကုမ်ပဏီက ပွောကွားခကျြအရ color e-Ink screens တှဟော e-reader တှအေတှကျ အဓိကပွဿနာ မဟုတျပါဘူး။ စမတျဖုနျး UI တှေ သုံးတဲ့အခြိနျမှာတော့ ကနျ့သတျခကျြတှေ ရှိနပေါသေးတယျ။ အဲ့ဒါဟာ ရှိပွီးသား monochrome screens တှထေကျ ပိုနှေးတဲ့ တုံ့ပွနျနိုငျစှမျးကို ရရှိတာပါ။ Hisense အနနေဲ့ အခုဖုနျးသဈကို မိတျဆကျမယျ့အခြိနျကိုတော့ တိတိကကြ ထုတျပွနျခွငျး မရှိသေးပါဘူး။ color e-Ink panels တှကေိုလညျး ယခုနှဈဝကျပိုငျးလောကျမှ အမွောကျအမြား ထုတျမှာပါ။ e-Ink displays တှဟော မကျြလုံးရဲ့ အားစိုကျမှုကို လြော့ခနြိုငျပွီး ပိုမိုတဲ့ ရှငျးလငျးပွတျသားမှုကို ရစတောက ဆှဲဆောငျမှုတဈခုလို့ သတျမှတျရမှာပါ။ Hisense အနနေဲ့ refresh rate ပွဿနာကိုသာ ရှငျးနိုငျမယျဆိုရငျ စိတျဝငျစားရှေးခယျြစရာ နောကျထပျ device တဈခု ဖွဈလာနိုငျပါတယျ။
(6). TCL Foldable Phone (Version Two)
တရုတျအီလကျထရောနဈကုမ်ပဏီ TCL အနနေဲ့ CES 2020 ပှဲမှာ FOLDABLE PHONE ကို ထုတျပွလိုကျပါတယျ။ TCL Foldable ဖုနျးဟာ 7.2-inch panel နဲ့ဖွဈပွီး အိတျဆောငျပုံစံမြိုးမဟုတျပမေယျ့ သူ့ကို ခေါကျသိမျးနိုငျမှာပါ။ ဒီဇိုငျးပုံစံအရ Foldable ဖုနျးတှထေဲမှာ သေးငယျတဲ့ အရှယျအစားလို့ သတျမှတျနိုငျပါလိမျ့မယျ။ ဒီဖုနျးကို ယခုနှဈအတှငျး ထုတျပေးမှာဖွဈပွီး ဈေးနှုနျးနဲ့ ရောငျးခမြယျ့အခြိနျကိုတော့ မသိရသေးပါဘူး။ secondary display မပါဝငျတာကွောငျ့ အခွားဖုနျးတှလေို ခေါကျလိုကျတဲ့အခြိနျမှာ အသုံးပွုနိုငျမှာ မဟုတျပါဘူး။ TCL အနနေဲ့ panel အမြိုးအစား၊ resolution တှေ display ပိုငျးနဲ့ ပတျသတျတဲ့ အခွားအခကျြအလကျတှကေို ထုတျဖျောပွောကွားခွငျး မရှိပါဘူး။ ပွီးတော့ ဘယျလို layer တှေ သုံးထားတယျဆိုတာလညျး မသိရသေးပါဘူး။ အပွငျဘကျ ကာဘာပုံစံကတော့ ဒိုငျးမှနျးပုံစံ အရောငျတောကျတောကျဖွဈပွီး နောကျကြောဘကျမှာ ကငျမရာ4လုံး တပျဆငျထားတာကို တှရေ့ပါတယျ။ TCL အနနေဲ့ ကငျမရာပိုငျးနဲ့ ပတျသတျပွီး အသေးစိတျအခကျြအလကျတှကေို ထုတျပွနျခွငျးမရှိပမေယျ့ resolution မွငျ့မားတဲ့ 48MP / 64MP ဆငျဆာတှေ သုံးပေးဖို့ သခြောနပေါတယျ။
(7). Ballie The Rolling Robot Is Samsung
Samsung ဟာ Concept AI သုံးစကျရုပျ Ballie (Ball-E လို့ချေါဝျေါ) ကို CES 2020 မှာ ပွသလာပါတယျ။ သကျရုပျရိုဘော့တဈကောငျလို့လညျး ပွောနိုငျပါတယျ။ Ballie က ပတျဝနျးကငျြရှိ နညျးပညာပစ်စညျးမြားနှငျ့ ခြိတျဆကျနိုငျကာ အိမျနှငျ့ အိမျမှေးတိရိစ်ဆာနျတို့ကို ထိနျးခြုပျနိုငျပါတယျ။ ဒီရိုဘော့ဟာ အိမျမှာ လြှောကျသှားနိုငျစှမျးရှိပွီး အဝတျလြှျောစကျဖှငျ့ခွငျး၊ တီဗှီ ဖှငျ့ခွငျး/ပိတျခွငျးတို့ ပွုလုပျနိုငျသလို သငျ အိမျမှာ မရှိတဲ့အခြိနျမှာ ခှေးကို အစာကြှေးခွငျးတို့ ပွုလုပျပေးနိုငျပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ အိမျသနျ့ရှငျးရေးလညျး လုပျခိုငျးနိုငျပါတယျ။ ယငျးအခကျြမြား လုပျနိုငျဖို့အတှကျ Ballie မှာ AI နညျးပညာပါ ကငျမရာ ပါဝငျပါတယျ။ Samsung က Ballie ကို အားကစားလှုပျရှားမှုအကူအဖွဈလညျး သုံးနိုငျကွောငျး ပွောကွားထားပါတယျ။ ဒတောကာကှယျခွငျး၊ ကိုယျရေးအခကျြအလကျကာကှယျခွငျးတို့ကို အကောငျးဆုံးဖွဈအောငျ လုပျထားကွောငျး Samsung က ပွောကွားထားပါတယျ။ လကျရှိအခြိနျမှာ Samsung ဟာ Ballie ကို ဘယျအခြိနျမှာ ဈေးကှကျမှာ ရောငျးခနြိုငျတဲ့အဆငျ့သို့ ရောကျအောငျလုပျဆောငျလာနိုငျမလဲဆိုတာ မပွောနိုငျသေးပါဘူး။
(8). TCL 10 Series
အီလကျထရောနဈပစ်စညျးထုတျလုပျမှုအပိုငျးမှာ နာမညျကြျောတဲ့ TCL အနနေဲ့ ကိုယျပိုငျအမှတျတံဆိပျနဲ့ စမတျဖုနျ3းမြိုးကို ထုတျပွလိုကျပါတယျ။ TCL 10 series ဖုနျးတှဖွေဈပွီး TCL 10 5G, 10 Pro, 10L ဖုနျးတှေ ဖွဈပါတယျ။ 10 5G နဲ့ 10L တှမှော သုံးထားတဲ့ flat displays အတှကျ ကုမ်ပဏီက ထုတျထားတဲ့ NXTVISION display ကို သုံးထားပွီး 10 Pro ဖုနျးမှာတော့ edge AMOLED screen ကို သုံးပေးထားပါတယျ။ TCL 10 5G ဖုနျးဟာ ကုမ်ပဏီရဲ့ ပထမဆုံး 5G ဖုနျးဖွဈလာပွီး Qualcomm 7-Series chipsets ဖွဈတဲ့ Snapdragon 765G ကို သုံးထားပါလိမျ့မယျ။ ဒီဖုနျးမှာ ကွီးမားတဲ့ Display နဲ့ဖွဈပွီး နောကျဘကျမှာ လကျဗှဖေတျစနဈကို ထညျ့ပေးထားပါတယျ။ အခွား 10-Series စမတျဖုနျး2မြိုးလိုပဲ ဒီဖုနျးမှာ quad-camera setup သုံးထားမှာပါ။ TCL 10 Pro မှာတော့ 10 5G နဲ့ ဆငျတူသယောငျ ထငျရပမေယျ့ အခွားအပိုငျးတှမှော ကှဲပွားခွားနားပါလိမျ့မယျ။ ရောငျပွနျ holographic ပုံစံအစား သူ့မှာ OnePlus7Pro မှာ သုံးထားတဲ့ glowy patterns လိုမြိုး ဖွဈပါတယျ။ 10 Pro မှာ in-display fingerprint scanner ပါဝငျပါလိမျ့မယျ။ TCL 10L ဖုနျးမှာတော့ အခွခေံမျောဒယျဖွဈပွီး 48MP နဲ့အတူ quad-camera setup ကို သုံးထားပါတယျ CES မှာ ပွသလိုကျတယျဆိုပမေယျ့ လကျရှိမှာတော့ ဈေးကှကျထဲကို ရောငျးခနြိုငျဦးမှာ မဟုတျပါဘူး။ အသဈပွသလိုကျတဲ့ စမတျဖုနျးတှကေိုတော့ မွောကျအမရေိက ဈေးကှကျမှာ အရငျရောငျးပေးသှားမှာဖွဈပွီး ကမ်ဘာ့ဈေးကှကျကိုတော့ 2020 နှဈကုနျပိုငျးလောကျမှာ ရောငျးခသြှားမယျလို့ သိရပါတယျ။
(9). Asus Introduces The ROG Swift 360Hz G-Sync Gaming Monitor
Asus ဟာ CES 2020 မှာ စမတျဖုနျးသဈ ကွညောလာခွငျးမရှိပမေယျ့ ဂိမျးကစားသူမြားအတှကျ စိတျလှုပျရှားဖို့ကောငျးတဲ့ Product မြားကို ကွငွောလာပါတယျ။ Asus ဟာ Zephyrus G14 နှငျ့ Zephyrus G15 လို့ အမညျပေးထားတဲ့ ဂိမျးလကျတော့ပျနှငျ့ Asus ROG Swift အမညျရှိ ဂိမျးမျောနီတာတို့ကို ကွညောလိုကျတာပါ။ ROG Swift 360 လို့ပေးထားတဲ့ နာမညျနဲ့အညီ ဒီမျောနီတာမှာ 360Hz Refresh Rate ပါဝငျပါတယျ။ မကျြနှာပွငျ 24.5 လကျမ ဖွဈပါတယျ။ ကမ်ဘာ့ပထမဆုံး 360Hz Refresh Rate ပါမျောနီတာ ဖွဈပါတယျ။ ရုပျထှကျ 1080p ထောကျပံ့ထားပါတယျ။ အားလုံးမြှျောလငျ့ထားသလိုဘဲ G-Sync ထောကျပံ့မှုကိုလညျး ထညျ့ပေးထားပါတယျ။
(10). Coolpad Legacy 5G Phone With 48-Megapixel Camera
Coolpad Legacy 5G မှာ မကျြနှာပွငျ 6.53 လကျမ IPS LCD FHD+ ရုပျထှကျသုံးထားကာ HDR10 ထောကျပံ့ထားပါတယျ။ နောကျကြောဘကျမှာ ကငျမရာနှဈလုံး၊ LED Flash ၊ လကျဗှရောစနဈကို ဒေါငျလိုကျထညျ့သှငျးထားကာ ဆှဲဆောငျမှု ရှိပါတယျ။ Snapdragon 765 ပရိုဆကျဆာကို သုံးထားပွီး RAM4GB နဲ့ သိုလှောငျမှု 64GB ထညျ့ပေးထားပါတယျ။ microSD ကနေ 128GB ထပျတိုးလို့ ရပါတယျ။ ကြောဘကျကငျမရာနှဈလုံးက 48MP+8MP Ultrawide ဖွဈပါတယျ။ ရှကေ့ငျမရာက 16MP ဖွဈပါတယျ။ Coolpad Legacy မှာ SIM ကတျတဈကတျဘဲ ထောကျပံ့ထားပါတယျ။ NFC စနဈ မပါဝငျပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ Sub-6GHz 5G Network ထောကျပံ့ထားကာ mmWave Frequency ထကျ လိုငျးကောငျးပါမယျ။ Android 10 တဈပါတညျး ပါဝငျပါတယျ။ ဘကျထရီ 4000 mAh ပါဝငျပွီး Quick Charge 3.0 ဖွငျ့ USB Type C မှ အားသှငျးနိုငျပါမယျ။ ဖုနျးအောကျခွမှော စပီကာနှငျ့ မိုကျခရိုဖုနျးတို့ ပါဝငျပါတယျ။ ဖုနျးထိပျမှာ နားကွပျပေါကျနှငျ့ မိုကျခရိုဖုနျးတို့ ပါဝငျပါတယျ။ Coolpad Legacy 5G ရဲ့ ဈေးနှုနျးကို ကွညောခွငျး မရှိသေးပမေယျ့ ဒျေါလာ 400 ဝနျးကငျြလောကျ ဖွဈနိုငျပါတယျ။
နှစ်သစ်တစ်ခုရဲ့ အစပိုင်းမှာ အမြဲကျင်းပနေတဲ့ CES ပွဲကြီးကတော့ ပြီးဆုံးသွားပါပြီ။ Consumer Electronic Show ဆိုတဲ့အတိုင်း စိတ်ဝင်စားစရာ နောက်ဆုံးပေါ် အီလက်ထရောနစ်ထုတ်ကုန်တွေကို မြင်တွေ့ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ ပြောရမယ်ဆိုရင် CES မှာ မြင်တွေ့ခဲ့သမျှ ထုတ်ကုန်အားလုံးဟာ ကျွန်တော်တို့အတွက် ယခုနှစ်အတွင်းမှာ သုံးစွဲဖို့ စောင့်မျှော်နေရမယ့် ထုတ်ကုန်တွေလို့ ဆိုရမှာပါ။ ကဲ ဒီတော့ CES 2020 မှာ ဘာထုတ်ကုန်သစ်တွေ မိတ်ဆက်ခဲ့တာလဲဆိုတာကို လေ့လာကြည့်ရအောင်။
Lenovo က ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က ပြသခဲ့တဲ့ ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး ခေါက်ချိုးမျက်နှာပြင်ပါတဲ့ PC ဖြစ်တဲ့ ThinkPad X1 Fold ကို ရောင်းတော့မယ်လို့ ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ Windows Hello ထောက်ပံ့တဲ့ ကင်မရာကို မျက်နှာပြင်ဘောင်မှာ ထည့်သွင်းထားပါတယ်။ 13.3 လက်မ မျက်နှာပြင်ဖြစ်ပြီး OLED Panel ကို သုံးထားပါတယ်။ LG Display က မျက်နှာပြင်ကို ထုတ်လုပ်ပေးထားတာဖြစ်ပြီး ခိုင်ခံ့မာကျောတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ Windows 10 Pro မောင်းနှင်ထားပါတယ်။ Single Full Screen Mode လိုသုံးနိုင်သလို App2ခုကို ဘေးချင်းယှဉ်ပြီး တစ်ပြိုင်နက်သုံးနိုင်တဲ့ Dual Screen Mode လည်း ပါပါတယ်။ Portrait Mode နဲ့သုံးရင် အောက်ခြေမှာ Screen Keyboard ကို သုံးနိုင်ပါတယ်။ မျက်နှာပြင်ကို ခေါက်ချိုးပြီး လက်ပ်တော့လိုသုံးတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အောက်ခြေတစ်ခြမ်းပေါ်မှာ Bluetooth Keyboard တင်ပြီးသုံးလို့လည်း ရပါတယ်။ Kickstand ထောင်ပြီး Bluetooth Keyboard နဲ့ တွဲသုံးလည်း ရပါတယ်။ အတွင်းပိုင်းအစိတ်အပိုင်းတွေကိုတော့ မသိရသေးပါဘူး။ Lenovo က Intel Platform ကို သုံးထားမယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ဘက်ထရီသက်တမ်းက 11 နာရီ ဖြစ်ပါတယ်။ Windows 10 Pro Model ကို ဒီနှစ်လယ်မှာ ရောင်းမှာပါ။ ဈေးကတော့ 2499 ဒေါ်လာ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
Samsung အနေနဲ့ Galaxy S10 Lite နဲ့ Galaxy Note10 Lite ဖုန်းတွေကို တရားဝင်ထုတ်ပေးလိုက်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ စမတ်ဖုန်းသစ်2မျိုးလုံးမှာ 6.7″ FullHD+ Infinity-O displays သုံးထားမှာဖြစ်ပြီး 4500 mAh ဘက်ထရီမှာ 25W fast charging support လုပ်တဲ့အပိုင်းတွေ တူညီမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Samsung Galaxy S10 Lite ဖုန်းမှာတော့ 7nm chipset တပ်ဆင်ထားပြီး 2.8GHz, 2.4GHz, 1.7GHz အမြန်နှုန်းရှိတဲ့ octa-core CPU တစ်ခုခု ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဘယ်လိုပရိုဆက်ဆာသုံးထားတယ်ဆိုတာကို အတည်မပြုရသေးတာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ Snapdragon 855 ဖြစ်မယ်လို့တော့ ပြောနေကြပါတယ်။ 6GB (သို့) 8GB RAM မှာ 128GB storage နဲ့ ဖြစ်မှာပါ။ ကင်မရာအတွက်တော့3လုံးဖြစ်ပြီး f/2.0 aperture နဲ့ 48MP ဆင်ဆာကင်မရာ၊ 123-degree FoVultrawide angle ရမယ့် 12MP sensor နဲ့ 5MP macro ဆင်ဆာတွေ သုံးထားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အရှေ့ဘက်ကင်မရာကတော့ 32MP sensor ဖြစ်ပါတယ်။ ပိုပြီး ထူးခြားချက်ကတော့ Galaxy S10 Lite စမတ်ဖုန်းဟာ Samsung ဖုန်းတွေထဲမှာ ပထမဆုံး Super Steady OIS ကို သုံးထားမယ့်ဖုန်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ အခြားဖုန်းတွေထက် ပိုသာလွန်တဲ့ ကင်မရာရဲ့ တည်ငြိမ်မှုကို ရပါလိမ့်မယ်။
Galaxy Note10 Lite ဖုန်းမှာတော့ Air Command support လုပ်တဲ့ S Pen ကို ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။ သူလည်း 32MP အရှေ့ဘက်ကင်မရာကို 6.7” FullHD+ display ရဲ့ punch hole ထဲမှာ ထည့်ထားမှာပါ။ Note10 Lite ပရိုဆက်ဆာပိုင်းအတွက် ထုတ်ဖော်ပြောကြားထားခြင်း မရှိသေးပေမယ့် 10nm process နဲ့ octa-core CPU ဖြစ်ဖို့ များပါတယ်။ RAM ကတော့ 6/8GB ဖြစ်ပြီး 128GB သိုလှောင်မှုနဲ့ သုံးနိုင်မှာပါ။ Galaxy Note10 Lite ရဲ့ နောက်ကျောဘက်မှာလည်း ကင်မရာ3လုံး အထိုင်ချထားပြီး Dual Pixel AF နဲ့ OIS ပါတဲ့ 12 MP f/1.7 အဓိကဆင်ဆာ၊ 12 MP f/2.2 ultrawide angle ဆင်ဆာနဲ့ 12 MP f/2.4 telephoto တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီထက်ပိုပြီး စိတ်လှုပ်ရှားစရာကတော့ Galaxy Note10 Lite ဖုန်းမှာ 3.5mm audio jack ကို ထည့်ပေးလိုက်တာပါ။ အရင်ထွက်ထားတဲ့ Galaxy Note10 မော်ဒယ်3မျိုးနဲ့ Galaxy S10 မော်ဒယ်3မျိုးလုံးမှာ audio port ကို ထည့်ထားခြင်း မရှိပါဘူး။ Galaxy S10 Lite နဲ့ Galaxy Note10 Lite ဖုန်းတွေမှာ One UI2နဲ့အတူ Android 10 ကို တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းပေးထားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Prism White, Prism Black ၊ Aura Glow, Aura Black, Aura Red paint jobs ဆိုပြီး အရောင်စုံလင်စွာ ထုတ်ပေးထားပါတယ်။ Galaxy Note10 Lite ရဲ့ ဈေးနှုန်းက ယူရို 599 ဖြစ်ပြီး S10 Lite ကတော့ ယူရို 649 သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
Sony ကတော့ CES မှာ အံ့သြစရာထုတ်ကုန်သစ်လို့ဆိုရမယ့် electric concept ကားကို ထုတ်ပြလိုက်ပါပြီ။ စမတ်ဖုန်းနဲ့ ဖျော်ဖြေရေးပစ္စည်းတွေသာထုတ်နေတဲ့ Sony အတွက် မတူညီတဲ့ ဈေးကွက်ကို ဦးတည်လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ Sony Vision-S လို့ နာမည်ပေးထားပြီး electric concept ဆီဒင်အမျိုးအစားကားပါ။ ဒီကားရဲ့ အချက်အလက်အချို့ကိုလည်း ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသေးတယ်။ အဲ့ဒါတွေကတော့ ကားရဲ့ အတွင်းနဲ့ အပြင်ပိုင်းမှာ မတူညီတဲ့ ဆင်ဆာအမျိုးအစား 33 ထိ ထည့်ပေးထားပြီး multiple widescreen displays, 360 audio အရည်အသွေးတွေပါ ပါဝင်ပါတယ်။ ဈေးကွက်ထဲမှာရှိတဲ့ BlackBerry နဲ့ Bosch မှာ ထည့်ပေးထားတဲ့ နည်းပညာမျိုးတွေပါ။ လုံခြုံရေးနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ နည်းပညာတွေကိုလည်း ကားမှာ ထည့်သွင်းပေးထားပါသေးတယ်။ နောက်ခုံမှာထိုင်တဲ့သူတွေအတွက်လည်း touchscreens2ခုကို ထည့်ပေးထားပါတယ်။ Sony ရဲ့ ကားအသစ်ဟာ အခြား SUVs ကားတွေလိုပဲ စွမ်းဆောင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ ဒီကားအတွက် လိုအပ်တဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေကို ထုတ်ပေးတဲ့ Magna ပြောလိုက်ပါတယ်။ ဆိုနီကုမ္ပဏီရဲ့ စီအီးအိုဖြစ်တဲ့ ကင်နီရှီယိုကတော့ ဒီကားရဲ့ ရှေ့ပြေးပုံစံနဲ့အတူ ကျွန်တော်တို့ဟာ မော်တော်ကားဈေးကွက်ထဲကို ဝင်ရောက်လာပြီဆိုတာကို ပြသလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ ထုတ်ဖော်မိတ်ဆက်ပွဲမှာ ပြောသွားပါတယ်။
OnePlus အနေနဲ့CES 2020 မှာ Concept One စမတ်ဖုန်းကို တရားဝင်ထုတ်ပြလိုက်ပါပြီ။ McLaren နဲ့ မိတ်ဖက်ပြုလုပ်ပြီး ထုတ်ထားတဲ့ အဲ့ဒီစမတ်ဖုန်းမှာ ကင်မရာဟာ ပေါ်လိုက်၊ ပျောက်လိုက် ပုံစံမျိုးနဲ့ ဖြစ်ပါတယ်။ OnePlus ကတော့ disappearing ကင်မရာလို့ နာမည်ပေးထားပါတယ်။ ဒီဇိုင်းက လုံးဝစွဲမက်ဖွယ်ဖြစ်ပြီး လုံးဝ အဝါရောင်စစ်စစ် လည်သာသားနဲ့ ပြုလုပ်ထားတာပါ။ ကင်မရာနဲ့ pop-up selfie ကင်မရာတွေ ထည့်ထားတဲ့ပုံစံက OnePlus 7T Pro နဲ့ဆင်တူပြီး ဒီဇိုင်းပုံစံကို သားရေနဲ့ ပုံဖော်ထားတာပါ။ ကင်မရာကို နောက်ဘက်ဖန်သားရဲ့အောက်မှာ ထည့်ထားတာဖြစ်ပြီး electrochromic glass ကို သုံးထားတာပါ။ ဖုန်းရဲ့ပုံစံကို McLaren က လက်ရှိထုတ်နေတဲ့ sports cars တွေရဲ့ ပုံစံပေါ်မူတည်ပြီး ဆန်းသစ်ထားတာပါ။ သင့်အနေနဲ့ နောက်ကျောဘက်ကင်မရာကို အသုံးမပြုမချင်း ကင်မရာဆင်ဆာတွေ ပေါ်လာမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကင်မရာကို ရိုက်ဖို့ပြင်ဆင်လိုက်တာနဲ့ ကွယ်ဝှက်ထားတဲ့ အခြေအနေကနေ ကင်မရာတွေ ပေါ်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကင်မရာပေါ်လာဖို့အချိန်ဟာ 0.7 စက္ကန့်သာ ကြာမှာဖြစ်ပါတယ်။
Hisense A5 ဖုန်းကိုတော့ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က ပြသခဲ့ပြီး e-Ink display သုံးထားပါတယ်။ ဒီနှစ်မှာလည်း Hisense အနေနဲ့ e-Ink display သုံးထားတဲ့ စမ်းသပ်ဗားရှင်း ရှေ့ပြေးစမတ်ဖုန်းတစ်မျိုးကို ထပ်မံပြသလိုက်ပါတယ်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို သိရခြင်းမရှိပေမယ့် display အသစ်ဟာ ယခင်ထုတ်ထားတဲ့ Hisense A5 ဖုန်းထက်စာရင် contrast နဲ့ refresh rates ပိုင်းမှာ ပိုကောင်းလာပါလိမ့်မယ်။ ကုမ္ပဏီက ပြောကြားချက်အရ color e-Ink screens တွေဟာ e-reader တွေအတွက် အဓိကပြဿနာ မဟုတ်ပါဘူး။ စမတ်ဖုန်း UI တွေ သုံးတဲ့အချိန်မှာတော့ ကန့်သတ်ချက်တွေ ရှိနေပါသေးတယ်။ အဲ့ဒါဟာ ရှိပြီးသား monochrome screens တွေထက် ပိုနှေးတဲ့ တုံ့ပြန်နိုင်စွမ်းကို ရရှိတာပါ။ Hisense အနေနဲ့ အခုဖုန်းသစ်ကို မိတ်ဆက်မယ့်အချိန်ကိုတော့ တိတိကျကျ ထုတ်ပြန်ခြင်း မရှိသေးပါဘူး။ color e-Ink panels တွေကိုလည်း ယခုနှစ်ဝက်ပိုင်းလောက်မှ အမြောက်အများ ထုတ်မှာပါ။ e-Ink displays တွေဟာ မျက်လုံးရဲ့ အားစိုက်မှုကို လျော့ချနိုင်ပြီး ပိုမိုတဲ့ ရှင်းလင်းပြတ်သားမှုကို ရစေတာက ဆွဲဆောင်မှုတစ်ခုလုိ့ သတ်မှတ်ရမှာပါ။ Hisense အနေနဲ့ refresh rate ပြဿနာကိုသာ ရှင်းနိုင်မယ်ဆိုရင် စိတ်ဝင်စားရွေးချယ်စရာ နောက်ထပ် device တစ်ခု ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
တရုတ်အီလက်ထရောနစ်ကုမ္ပဏီ TCL အနေနဲ့ CES 2020 ပွဲမှာ FOLDABLE PHONE ကို ထုတ်ပြလိုက်ပါတယ်။ TCL Foldable ဖုန်းဟာ 7.2-inch panel နဲ့ဖြစ်ပြီး အိတ်ဆောင်ပုံစံမျိုးမဟုတ်ပေမယ့် သူ့ကို ခေါက်သိမ်းနိုင်မှာပါ။ ဒီဇိုင်းပုံစံအရ Foldable ဖုန်းတွေထဲမှာ သေးငယ်တဲ့ အရွယ်အစားလို့ သတ်မှတ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီဖုန်းကို ယခုနှစ်အတွင်း ထုတ်ပေးမှာဖြစ်ပြီး ဈေးနှုန်းနဲ့ ရောင်းချမယ့်အချိန်ကိုတော့ မသိရသေးပါဘူး။ secondary display မပါဝင်တာကြောင့် အခြားဖုန်းတွေလို ခေါက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ အသုံးပြုနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ TCL အနေနဲ့ panel အမျိုးအစား၊ resolution တွေ display ပိုင်းနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ အခြားအချက်အလက်တွေကို ထုတ်ဖော်ပြောကြားခြင်း မရှိပါဘူး။ ပြီးတော့ ဘယ်လို layer တွေ သုံးထားတယ်ဆိုတာလည်း မသိရသေးပါဘူး။ အပြင်ဘက် ကာဘာပုံစံကတော့ ဒိုင်းမွန်းပုံစံ အရောင်တောက်တောက်ဖြစ်ပြီး နောက်ကျောဘက်မှာ ကင်မရာ4လုံး တပ်ဆင်ထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။ TCL အနေနဲ့ ကင်မရာပိုင်းနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကို ထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိပေမယ့် resolution မြင့်မားတဲ့ 48MP / 64MP ဆင်ဆာတွေ သုံးပေးဖို့ သေချာနေပါတယ်။
Samsung ဟာ Concept AI သုံးစက်ရုပ် Ballie (Ball-E လို့ခေါ်ဝေါ်) ကို CES 2020 မှာ ပြသလာပါတယ်။ သက်ရုပ်ရိုဘော့တစ်ကောင်လို့လည်း ပြောနိုင်ပါတယ်။ Ballie က ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ နည်းပညာပစ္စည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်နိုင်ကာ အိမ်နှင့် အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တို့ကို ထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီရိုဘော့ဟာ အိမ်မှာ လျှောက်သွားနိုင်စွမ်းရှိပြီး အဝတ်လျှော်စက်ဖွင့်ခြင်း၊ တီဗွီ ဖွင့်ခြင်း/ပိတ်ခြင်းတို့ ပြုလုပ်နိုင်သလို သင် အိမ်မှာ မရှိတဲ့အချိန်မှာ ခွေးကို အစာကျွေးခြင်းတို့ ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အိမ်သန့်ရှင်းရေးလည်း လုပ်ခိုင်းနိုင်ပါတယ်။ ယင်းအချက်များ လုပ်နိုင်ဖို့အတွက် Ballie မှာ AI နည်းပညာပါ ကင်မရာ ပါဝင်ပါတယ်။ Samsung က Ballie ကို အားကစားလှုပ်ရှားမှုအကူအဖြစ်လည်း သုံးနိုင်ကြောင်း ပြောကြားထားပါတယ်။ ဒေတာကာကွယ်ခြင်း၊ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ကာကွယ်ခြင်းတို့ကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ထားကြောင်း Samsung က ပြောကြားထားပါတယ်။ လက်ရှိအချိန်မှာ Samsung ဟာ Ballie ကို ဘယ်အချိန်မှာ ဈေးကွက်မှာ ရောင်းချနိုင်တဲ့အဆင့်သို့ ရောက်အောင်လုပ်ဆောင်လာနိုင်မလဲဆိုတာ မပြောနိုင်သေးပါဘူး။
အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုအပိုင်းမှာ နာမည်ကျော်တဲ့ TCL အနေနဲ့ ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ်နဲ့ စမတ်ဖုန်3းမျိုးကို ထုတ်ပြလိုက်ပါတယ်။ TCL 10 series ဖုန်းတွေဖြစ်ပြီး TCL 10 5G, 10 Pro, 10L ဖုန်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ 10 5G နဲ့ 10L တွေမှာ သုံးထားတဲ့ flat displays အတွက် ကုမ္ပဏီက ထုတ်ထားတဲ့ NXTVISION display ကို သုံးထားပြီး 10 Pro ဖုန်းမှာတော့ edge AMOLED screen ကို သုံးပေးထားပါတယ်။ TCL 10 5G ဖုန်းဟာ ကုမ္ပဏီရဲ့ ပထမဆုံး 5G ဖုန်းဖြစ်လာပြီး Qualcomm 7-Series chipsets ဖြစ်တဲ့ Snapdragon 765G ကို သုံးထားပါလိမ့်မယ်။ ဒီဖုန်းမှာ ကြီးမားတဲ့ Display နဲ့ဖြစ်ပြီး နောက်ဘက်မှာ လက်ဗွေဖတ်စနစ်ကို ထည့်ပေးထားပါတယ်။ အခြား 10-Series စမတ်ဖုန်း2မျိုးလိုပဲ ဒီဖုန်းမှာ quad-camera setup သုံးထားမှာပါ။ TCL 10 Pro မှာတော့ 10 5G နဲ့ ဆင်တူသယောင် ထင်ရပေမယ့် အခြားအပိုင်းတွေမှာ ကွဲပြားခြားနားပါလိမ့်မယ်။ ရောင်ပြန် holographic ပုံစံအစား သူ့မှာ OnePlus7Pro မှာ သုံးထားတဲ့ glowy patterns လိုမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ 10 Pro မှာ in-display fingerprint scanner ပါဝင်ပါလိမ့်မယ်။ TCL 10L ဖုန်းမှာတော့ အခြေခံမော်ဒယ်ဖြစ်ပြီး 48MP နဲ့အတူ quad-camera setup ကို သုံးထားပါတယ် CES မှာ ပြသလိုက်တယ်ဆိုပေမယ့် လက်ရှိမှာတော့ ဈေးကွက်ထဲကို ရောင်းချနိုင်ဦးမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အသစ်ပြသလိုက်တဲ့ စမတ်ဖုန်းတွေကိုတော့ မြောက်အမေရိက ဈေးကွက်မှာ အရင်ရောင်းပေးသွားမှာဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာ့ဈေးကွက်ကိုတော့ 2020 နှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်မှာ ရောင်းချသွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။
Asus ဟာ CES 2020 မှာ စမတ်ဖုန်းသစ် ကြေညာလာခြင်းမရှိပေမယ့် ဂိမ်းကစားသူများအတွက် စိတ်လှုပ်ရှားဖို့ကောင်းတဲ့ Product များကို ကြေငြာလာပါတယ်။ Asus ဟာ Zephyrus G14 နှင့် Zephyrus G15 လို့ အမည်ပေးထားတဲ့ ဂိမ်းလက်တော့ပ်နှင့် Asus ROG Swift အမည်ရှိ ဂိမ်းမော်နီတာတို့ကို ကြေညာလိုက်တာပါ။ ROG Swift 360 လို့ပေးထားတဲ့ နာမည်နဲ့အညီ ဒီမော်နီတာမှာ 360Hz Refresh Rate ပါဝင်ပါတယ်။ မျက်နှာပြင် 24.5 လက်မ ဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး 360Hz Refresh Rate ပါမော်နီတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရုပ်ထွက် 1080p ထောက်ပံ့ထားပါတယ်။ အားလုံးမျှော်လင့်ထားသလိုဘဲ G-Sync ထောက်ပံ့မှုကိုလည်း ထည့်ပေးထားပါတယ်။
Coolpad Legacy 5G မှာ မျက်နှာပြင် 6.53 လက်မ IPS LCD FHD+ ရုပ်ထွက်သုံးထားကာ HDR10 ထောက်ပံ့ထားပါတယ်။ နောက်ကျောဘက်မှာ ကင်မရာနှစ်လုံး၊ LED Flash ၊ လက်ဗွေရာစနစ်ကို ဒေါင်လိုက်ထည့်သွင်းထားကာ ဆွဲဆောင်မှု ရှိပါတယ်။ Snapdragon 765 ပရိုဆက်ဆာကို သုံးထားပြီး RAM4GB နဲ့ သိုလှောင်မှု 64GB ထည့်ပေးထားပါတယ်။ microSD ကနေ 128GB ထပ်တိုးလို့ ရပါတယ်။ ကျောဘက်ကင်မရာနှစ်လုံးက 48MP+8MP Ultrawide ဖြစ်ပါတယ်။ ရှေ့ကင်မရာက 16MP ဖြစ်ပါတယ်။ Coolpad Legacy မှာ SIM ကတ်တစ်ကတ်ဘဲ ထောက်ပံ့ထားပါတယ်။ NFC စနစ် မပါဝင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် Sub-6GHz 5G Network ထောက်ပံ့ထားကာ mmWave Frequency ထက် လိုင်းကောင်းပါမယ်။ Android 10 တစ်ပါတည်း ပါဝင်ပါတယ်။ ဘက်ထရီ 4000 mAh ပါဝင်ပြီး Quick Charge 3.0 ဖြင့် USB Type C မှ အားသွင်းနိုင်ပါမယ်။ ဖုန်းအောက်ခြေမှာ စပီကာနှင့် မိုက်ခရိုဖုန်းတို့ ပါဝင်ပါတယ်။ ဖုန်းထိပ်မှာ နားကြပ်ပေါက်နှင့် မိုက်ခရိုဖုန်းတို့ ပါဝင်ပါတယ်။ Coolpad Legacy 5G ရဲ့ ဈေးနှုန်းကို ကြေညာခြင်း မရှိသေးပေမယ့် ဒေါ်လာ 400 ဝန်းကျင်လောက် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
Previous articleHP Pavilion X360 14-dh0108TX (Natural Silver)
Next articleiPhone7Plus